भारतमा ८ हजार ८०० जनामा म्यूकोर्माइसकोसिस अर्थात् कालो ढुसीको सङ्क्रमण - Pradesh Dainik
भारतमा ८ हजार ८०० जनामा म्यूकोर्माइसकोसिस अर्थात् कालो ढुसीको सङ्क्रमण
भारतमा म्यूकोर्माइकोसिस अर्थात् कालो ढुसीको सङ्क्रमण भएका ८ हजार ८०० जनाभन्दा बढी बिरामी फेला परेका छन्। प्रायः दुर्लभ मानिने यो रोग अहिले प्रकोपका रूपमा फैलिरहेको छ। कोभिड भएर निको हुके क्रममा रहेका मानिसहरू यसबाट पीडित भएको पाइएको छ।
यो रोगमा मृत्युदर ५० प्रतिशत भएको बताइन्छ। सङ्क्रमितलाई जोगाउन शल्यक्रिया गरेर आँखा फाल्नुपर्ने अवस्था पनि आउने गरेको छ। कोभिड उपचारका क्रममा प्रयोग गरिने स्टेरोइड औषधिको प्रयोगका कारण म्यूकोर्माइकोसिस देखा परेको हुनसक्ने चिकित्सकहरूले बताएका छन्। मधुमेह भएका बिरामीमा यो ढुसीबाट सङ्क्रमण हुने ठूलो जोखिम छ।
कोभिडबाट निको भएको १२ देखि १८ दिनमा ढुसीबाट सङ्क्रमण हुन सक्ने चिकित्सकहरूले बताएका छन्। अहिलेसम्म फेला परेका सङ्क्रमितमध्ये आधाभन्दा बढी पश्चिम भारतका गुजरात र महाराष्ट्र राज्यका छन्। अन्य १५ वटा राज्यमा पनि कालो ढुसीको सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्न थालेकाले भारतका २९ वटा राज्यलाई म्यूकोर्माइकोसिसलाई प्रकोप घोषणा गर्न भनिएको छ।
म्यूकोर भनिने यो ढुसी माटो, वनस्पति, मलखाद र कुहिएका फलफूल र तरकारीमा पाइन्छ इन्दोर सहरस्थित एउटा अस्पतालमा गत साता कालो ढुसी भएका आठ बिरामी थिए। तर शनिवार साँझसम्म त्यो सङ्ख्या बढेर १८५ पुगेको छ। उक्त अस्पतालमा कार्यरत डा. भीपी पाण्डेका अनुसार तीमध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढीलाई तत्कालत शल्यक्रिया गर्नुपर्ने देखिएको छ।
कालो ढुसीको सङ्क्रमण अहिले कोभिड १९ भन्दा बढी चुनौतीपूर्ण बनेको छ। बिरामीले समयमा राम्ररी उपचार नपाउने हो भने मृत्यदर ९४ प्रतिशतसम्म पुग्न सक्ने डा. पाण्डेले बताए । पाण्डेका अनुसार यसको उपचार पनि महँगो छ औषधिको पनि अभाव रहेको छ।